Ebɛn Enyidado na Ɔwɔ Hɔ ma Ewufo? | Asɛmpa
1. Ebɛn asɛmpa na ɔwɔ hɔ a ɔfa ewufo ho?
Ber a Jesus dur Bethany a ɔbɛn Jerusalem no, nna ne nyɛnko Lazarus ewu ma oedzi ndaanan. Jesus na nyia oewu no ne nkyerɛbaa, Martha na Mary, kɔr beebi a nna woesie fun no. Annkyɛr na nyimpadɔm twaa hɔ hyiae. Twa ho mfonyin wɔ w’adwen mu hwɛ, enyigye a Martha na Mary nyae ber a Jesus nyaan Lazarus fii ewufo mu no!​—Kenkan John 11:21-24, 38-44.
Nna Martha nyim asɛmpa a ɔwɔ hɔ a ɔfa ewufo ho no dada. Nna onyim dɛ Jehovah benyan ewufo ma wɔaasan abɛtsena asaase do bio.​—Kenkan Job 14:14, 15.
2. Ebɛn tsebea na ewufo wɔ mu?
Nyankopɔn see Adam dɛ: “Huntuma nye wo, na huntuma mu na ebɛsan akɔ.”​—GENESIS 3:19.
Nyankopɔn dze asaase do huntuma bɔɔ nyimpa. (Genesis 2:7; 3:19) Nyimpa nnyɛ sunsum abɔdze a ɔtse honam nyimpadua mu. Osiandɛ yɛyɛ honam abɔdze ntsi, hɛn nyimpadua ne fã biara nnyi hɔ a ɔkɔ do yɛ edwuma ber a yeewu no. Sɛ yewu a, hɛn adwen no so wu na hɛn tsirmu nsɛm yew. Osiandɛ ewufo nnyim biribiara ntsi, Lazarus annkã hwee wɔ tsebea a ɔkɔr mu ber a owui no ho.​—Kenkan Ndwom 146:4; Ɔsɛnkafo 9:5, 6, 10.
Aso Nyankopɔn yɛ nkorɔfo ayaayaadze wɔ ogya mu wɔ hɔn wu ekyir? Osiandɛ Bible no kyerɛkyerɛ dɛ ewufo nnyim biribiara ntsi no, abɔnsamgyamu yɛ ator nkyerɛkyerɛ a ɔma nkorɔfo bɔ Nyankopɔn sombo wɔ dza ɔmmbaa n’adwen mu da no ho. Nkorɔfo a wɔyɛ hɔn ayaayaadze wɔ ogya mu no yɛ ekyiwadze ma no.​—Kenkan Jeremiah 7:31.
Hwɛ video a wɔato dzin Ebɛn Tsebea Na Ewufo Wɔ Mu?
3. Ana ewufo botum nye atseasefo akasa?
Ewufo nnkotum akasa anaa mpo wɔaatse asɛm. (Ndwom 115:17) Naaso abɔfo no mu binom yɛ abɔfo bɔn. Wotum yɛ hɔn ho tse dɛ nyimpa a woewuwu no na wɔnye nkorɔfo kasa. (2 Peter 2:4) Jehovah kyir koraa dɛ yɛnye ewufo bɛkasa.​—Kenkan Deuteronomy 18:10, 11.
4. Woananom na wobenyan hɔn efi ewufo mu?
Wobenyan nyimpa ɔpepem pii a woewuwu no ma wɔaasan abɛtsena asaase do bio. Wobenyan nyimpa binom mpo a nna wonnyim Nyankopɔn na wɔyɛɛ ndzeyɛbɔn no.​—Kenkan Ndwom 37:29; Ndwuma 24:15.
Hɔn a wobenyan hɔn no benya hokwan esũa Nyankopɔn ho nokwasɛm, na wɔaakyerɛ dɛ wɔwɔ Jesus no mu gyedzi dze nam setsie a wɔbɛyɛ ama no no do. (Nyikyerɛ 20:11-13) Hɔn a wobenyan hɔn aba nkwa mu na wɔbɛyɛ ndzeyɛtsenenee no bɛtsena asaase do daa.​—Kenkan John 5:28, 29.
5. Ebɛnadze na owusoɛr no ma yehu fa Jehovah ho?
Nyankopɔn maa ne Ba no bowui maa hɛn mbrɛ ɔbɛyɛ a ewufo benya enyidado. Ntsi owusoɛr no ma yehu Jehovah no dɔ nye n’adom mbordo. Sɛ wonyan ewufo ba nkwa mu a, woana paa na w’enyi bɛgye ho dɛ ibohu no?​—Kenkan John 3:16; Romefo 6:23.
Sũa dza Bible no kã fa tsebea a ewufo wɔ mu nye siantsir a nyimpa wu no ho.
Owusoɛr bi Bɛba!
Ana ahwer wɔ dɔfo bi wɔ owu mu? Ana ibohu no bio da bi? Sũa dza Bible no kyerɛkyerɛ fa owusoɛr no ho.
Nokwasɛm a Ɔfa Abɔfo Ho
Bible no kã abɔfo na abɔfo bɔn ho asɛm. Aso dɛm esunsum abɔdze yi wɔ hɔ ankasa? Ana wobotum aboa hɛn anaa woeepira hɛn?
Fa mona Fa mona Ebɛn Enyidado na Ɔwɔ Hɔ ma Ewufo?